जेठ १९ अर्थात दरवार हत्याकाण्ड: बत्ति निभेकाे त्याे कहालिलाग्दाे रात::mirmireonline.com
जेठ १९ अर्थात दरवार हत्याकाण्ड: बत्ति निभेकाे त्याे कहालिलाग्दाे रात
शुक्रबारको दिन बिहानैदेखि चर्को घाम लागेको थियो। २०५८ जेठ १९ गते बिहान आठ बजे सधैं झैं महाराजाधिराज सरकार ‘मर्निङ वाक’ मा निस्किबक्स्यो। त्यस दिन मौसुफको अनुहार अवसादले ढाकेजस्तो अलि अँध्यारो देखिन्थ्यो। लाग्थ्यो, कुनै किसिमको वलिष्ठ बोझ झेल्नु परिरहेको छ। शिष्टाचारले मिल्दो हो त म ‘के भयो सरकार’ भनी सोध्ने थिएँ। तर म त फगत एउटा पाश्र्ववर्ती मात्र न थिएँ ! मनमनै नियालें मात्र।
मध्य दिनमा घाम चर्किंदै गयो। दरबारबाट निस्किएर म नजिकैको भाटभटेनी सुपर मार्केटमा गएँ। मेरी पत्नी जानुका पनि त्यहीं आएकी थिइन्। मैले एउटा शीतल खालको सेतो सर्ट र एउटा हाफ पाइन्ट किनें। किनमेल सकेर हामी सीधै भक्तपुर घर गयौं। केहीबेर वि श्राम गरेर साँझ ६ः३० बजे फेरि दरबार फर्किएँ।
अचेल मेरो मनमा कहिलेकाहीं सोचाइ आउँछ— त्यो साँझको पार्टी त्रिशूल सदनमै गरिएको भए इतिहासको रथ सायद अर्कै ढंगबाट घुम्थ्यो कि ! पछि त्यहाँ जे अनिष्ट भयो, त्यसबाट जोगिन सकिन्थ्यो कि ! किनभने त्रिशूल सदनभित्र राजालाई भेट्न छिर्नुअघि परिवारकै सदस्यसमेत अंगरक्षकहरूबाट गुज्रिनुपथ्र्याे। युवराजको त्रिभुवन सदनमा चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था थिएन। एडीसी कक्ष अलि बाहिर थियो, युवराजको खोपी अर्कोतर्फ। त्यहाँ भित्रभित्रबाटै आउजाउ गर्न सकिन्थ्यो।
मंगल सदन र त्रिभुवन सदनबीचको दूरी एक सय ५० मिटरजति छ। सरकारले उही सजिलो परिधान पहिरिबक्सेको थियो— सेतो कमिज सुरुवाल, वेस्ट कोट र खोल्दा–लाउँदा च्यार्रच्यार्र गर्ने फित्तावाल चप्पल। सरकार अघिअघि हिँडिबक्स्यो, सदा झैं छायाजस्तो बनेर मैले पछ्याइरहें।
मैले सरकारको सवारी त्रिभुवन सदनको भुईंतलामा बिलियर्ड हलको अघिल्तिर मुमा बडामहारानी रत्न बसिबक्सेको कोठाको ढोकासम्म चलाएँ। अनि सोधें, ‘ब्याग के गरौं सरकार ? ’ सरकारबाट हुकुम भयो, ‘अर्दलीलाई देऊ !’ म त्यो खैरो ब्रिफकेस लिएर अलिकति वर रहेको त्रिभुवन सदनको एडीसी अफिसतिर लागें। अनि फोन गरेर मौसुफका निजी सहायक श्रीबहादुर बुढाथोकीलाई सरकारको ब्याग लिन आऊ भनें। श्रीबहादुर आइनपुग्दै त्रिभुवन सदनलाई अनिष्टको अँध्यारोले छोपिसकेको रहेछ। सम्भवतः महाराजको पिस्तोल पनि त्यही ब्यागमै रह्यो।
सरकार दरबारका यस्ता आन्तरिक कार्यक्रममा भित्रिएपछि हामी एडीसी कार्यालयमा बसेर अन्य काम गर्न थाल्थ्यौं। आउने हप्ताको तयारीका साथै आवश्यक लेखपढ गर्ने समय यसै बेला जुथ्र्याे। त्यो गर्दागर्दै पनि चनाखो नजर भने हामीले लगाइरहेका हुन्थ्यौं।
कोठामा फर्किएर हामी आआफ्ना कुर्सीमा बस्यौं। ‘सर, हेर्नुहोस् त’, गजेन्द्रले कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ इसारा गर्दै देखाए। त्यहाँ मान्छेहरूको टाउको काटेर पर्खालमा राखिएको भयानक दृश्य थियो। इन्डोनेसियाको साम्पित क्षेत्रमा चलिरहेको जातीय हिंसाका क्रममा ठूलो नरसंहार भएको रहेछ। मैले त्यो हृदयविदारक तस्बिर धेरैबेर हेरिरहन सकिनँ। गजेन्द्रलाई ‘यस्तो नदेखाऊ है’ भन्दै आफ्नो डेस्कतिर फर्किएँ। कस्तो विचित्रको संयोग ! केहीबेरमा आफ्नै छेउमा दर्दनाक घटना हुन लागेको रहेछ।
गजेन्द्रले सुरुमा ढोका खोल्दा गोलीसँगै ‘डाक्टर चाँडो बोलाऊ !’ भन्ने स्त्री–स्वर सुनिएको थियो। यसरी चिच्याउने मानिस सम्भवतः बडामहारानी होइबक्सन्थ्यो। मैले शाही चिकित्सक डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई मोबाइलबाट ‘एसओएस कल’ गर्न खोजें, सम्पर्क भएन। अनि तुरुन्तै इन्टरकमको ‘वन टच बटन’ मा थिचेर फाइटिङ फोर्सलाई खबर गरें, ‘त्रिभुवन सदनमा गोली चल्यो, तुरुन्त सपोर्ट पठाऊ।’
दगुर्दै जाँदा झ्यालबाट मेरा आँखा हलभित्र सरर्र पुगे, मान्छे पूरै सोत्तर भएर लडेको देखें। बिलियर्ड टेबलनजिक वीरेन्द्र सरकारको शरीर समातेर पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्रका ज्वाइँ डा. राजीव शाही बस्नुभएको थियो। त्यहाँ छिर्ने एउटै मात्र ढोका पूर्वतिर थियो, प्यासेजपट्टि अलिकति घुमेर जानुपथ्र्यो म दगुर्दै भित्र पुग्दा केही क्षणअघि मात्र देखिएका डा. शाही त्यहाँ हुनुहुन्नथ्यो।
त्यसबेला हलको बाहिरपट्टि गोली चल्दै थियो। हलभित्र पुग्दा भएभरका मानिस भुइँमा लडेको देखें। त्यो रगताम्मे माहोलमा सुरुमा त तिरिमिरी भयो। तर तत्कालै आफूलाई सम्हालें। कोको लडे र कसलाई केके भयो भनेर सोच्ने–हेर्ने समय थिएन। एकएक सेकेन्डको महŒव थियो। मेरो ध्यान महाराजाधिराजतिर मात्र केन्द्रित थियो। लडेका मानिसलाई नाघ्दै म सरकार भएको ठाउँमा पुगें। सरकारलाई गोली लागेको प्रस्ट भइसकेको थियो। बिलियर्ड टेबलनजिक भुइँमा ढलेका राजालाई कसरी बाहिर निकाल्ने र अस्पताल लैजाने भन्ने मेरा लागि मुख्य चुनौती बन्यो।
गोली चलिरहेको बेला राजालाई मूल द्वारबाटै बाहिर लैजाँदा खतरा देखेकाले अरू बेला सधैं बन्द हुने अर्काे सिसाको ढोका खोल्न खोजें, खुलेन। लात्तीले हानेर फोर्न खोजें, सम्भव भएन। अनि बिजुली गतिमा दौडेर बाहिर निस्किएँ। त्यतिन्जेल प्रफुल्लविक्रम शाह, पवन खत्रीलगायत जुनियर एडीसी पनि त्यहाँ आइसकेका रहेछन्। बाहिरपट्टिबाट त्यो ढोका फुटाउने काममा उनीहरूले पनि सघाए।
योभन्दा ठूलो संकट के हुन सक्थ्यो र ! हामी आत्तिएका थियौं। तर सन्तुलन गुमाएका थिएनौं। बाटोमा जाँदासम्म मलाई आशा थियो, छिटो अस्पताल पुर्‍याउन पाए राजालाई बचाउन सकिन्छ। त्यही आशाको त्यान्द्रो समात्दै मैले झन्डै गोलीकै गतिमा गाडी कुदाइरहेको थिएँ। अमृत साइन्स क्याम्पस, सोह्रखुट्टे हुँदै बालाजु चोक र त्यहाँबाट वनस्थली पुगेपछि सैनिक अस्पतालतिर जाने देब्रेतिरको छोटो बाटो रोजें। केही खाल्डाखुल्डी भए पनि अस्पताल छिटो पुगिन्थ्यो। ज्यागुअर कम ‘क्लियरेन्स’ को कार भएकाले त्यसको फेद बरोबर खाल्डाखुल्डीमा धस्सिन्थ्यो। त्यसलाई पर्वाह नगरी मैले सकेको गतिमा गाडी चलाइरहें।
केही पर एउटा ट्रक धीमा गतिमा कुदिरहेको देखियो। मैले बेस्सरी हर्न बजाएँ, एडीसीहरूले उसैगरी ‘बाटो छोड्’ भन्दै कराए। सुन्ने मान्छेहरूलाई के आपत् आइलागेर यिनीहरू कराएका होलान् भन्ने लाग्यो होला। तर हामी कराएको सुनेपछि सामान्यतया अटेरी बनेर ढसमस्स सडक ओगट्ने ट्रकले पनि हामीलार्ई तुरुन्त बाटो छाडिदियो।
हामी ‘नारायण ! नारायण !!’ भन्दै भगवान्लाई पनि पुकारिरहेका थियौं। आपत् पर्दा मानिसको सहारा भनेको देवताको नाम जप्नु नै हुँदो रहेछ। कहीं बाटो छोड् भनेर कराउने, कहिले भगवान्लाई सम्झिने, डाक्टरलाई फोन गर्ने कहिले दरबारभित्र ‘कन्ट्रोल रुम’ मा वाकिटकीबाट कुरा गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन लगाउने र कहिले पछाडिबाट आक्रमण त हुन आँटेको त छैन भनेर सतर्क हुने काम गर्दागर्दै सैनिक अस्पताल पुग्यौं। रातको ९ः१५ जति बजेको थियो।
(तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका प्रमुख एडीसी सुन्दरप्रताप रानाले लेखेको पुस्तक ‘दरबारको दुःखान्त’ बाट सम्पादनसहित साभार)